NEPNEWS: UMartin Vrijland
Ukuhlaselwa nokuhlaselwa kwefulege lamanga: ngokusebenzisa isisulu, anti-thesis kanye synthesis New World Order
ahanjiswe NEPNEWS, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-14 April 2017	• 16 Amazwana
Kubonakala kunzima ukuqonda ukuthi lo mdlalo udlalwa kanjani ku-chessboard yomhlaba wonke. Ezweni lamanye amasayithi ezindaba, kukhona abanye abaye bafika bekhazimulisa uDonald Trump nabanye abambona uPutin njengendoda elwa neNew World Order. Lezo zindawo zokugcina ngokuvamile zilungiselelwe [...]
I-Nepniews, izindaba zangempela, ama-hoaxes, amafulege amanga, abezindaba kanye nezombangazwe; yiqiniso futhi yini engelona iqiniso?
ahanjiswe NEPNEWS, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-28 December 2016	• 63 Amazwana
Sibonile okwesaba okukhulu eminyakeni yamuva. Leli webhusayithi liye labika ngezinye izikhathi futhi ngezinye izikhathi lafika esiphethweni sokuthi izinto azilungile. Ezinye zihlaziya zaholela esiphethweni sokuthi ukwesaba kwakukhona futhi abanye babekhona 'ifulege lamanga'. Lokhu akusho ukuthi zonke izihlasela [...]
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.374.295